Agba ewu | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Agba ewu
Leman - ụdị nke ewu
Ná mmalite nke narị afọ nke iri abụọ, site na ógbè La Mancha - Spain, e wetara ụmụ ewu dị na Mexico. Ugbua na 1930, ha bi na United States, Oregon. N'afọ ndị sochirinụ, ndị na-azụ atụrụ malitere ịrụ ọrụ na-ebute ụdị ọhụụ ọhụrụ. Mgbe ha na-agafe ewu na-acha akwụkwọ ndụ na Switzerland, Nubians na ụdị ndị ọzọ, ndị ọkà mmụta sayensị nwetara ụdị ọhụrụ pụrụ iche, nke a na-akpọ La Mancha.
Ihe nile gbasara ewu Saanen
Azụ ewu maka nzube nke inweta mmiri ara ehi abụghị ọrụ a na-ewu ewu na ụbụrụ anyị, nke bụ isi na-adabere n'ọdị ala dị ntakịrị nke ụmụ anụmanụ na-enye ọtụtụ mmiri ara ehi. Otú ọ dị, ka oge na-aga, mmepe nke ọganihu sayensị na nkà na ụzụ na ijikọta atụmatụ dị iche iche nke ọrụ ugbo nke ego e nwetara na mba dị iche iche, onye ọ bụla n'ime ndị ọrụ ugbo nke oge a malitere inwe ohere ịzigharịa usoro anụ ụlọ ha, gụnyere ewu, nke dị mma ma nwee ụba.
Nubian ewu ewu: peculiarities nke na-edebe n'ụlọ
Akwukwo Nubian nwere ike ime ka abuo mmiri ara ehi kwa afo, ya mere a bu oke umu ewu. Ọbụna ọkachamara nwere ahụmahụ nwere ike ịhapụ ya. Ihe kachasị mkpa bụ ịmara ihe ndị na-edozi anụ na ihe oriri nke anụmanụ. Ka anyi mata nke oma. Ihe mere eme nke a bụ ndị Bekee na-azụ anụ a, bụ nke sitere na ya bụ aha aha - ewu ewu Anglo-Nubian.
Azụ ewu na atụrụ Saanen
Nkume kachasị ọnụ ewu nke ewu ewu na-edozi ara bụ Suisse Zaanen, bụ ebe a mụrụ obodo Zaanen, nke dị na Alps. Anumanu a di iche site na ndi ozo site na oke onu ogugu ya, ezi omumu na ime mgbanwe maka onodu ugwo ojoo.
Kameru ewu ewu na Cameroon: nlekọta na nlekọta n'ụlọ
Ụmụ anụmanụ ndị na-agba agba abụghị nanị ndị bi na zoos. Ndị ọrụ ugbo na-eri ụdị anụmanụ dị iche iche n'oge dị iche iche nke ọma dị iche iche dị iche iche: dịka anụ ụlọ, maka njem nlegharị ugbo, wdg. Na nyocha a, anyị ga-elekwasị anya na ewu ewu na ndị Cameroon na àgwà ha. Ihe ọmụma zuru oke Kọmitii Cameroon ewu aghọwo ebe nile n'ụwa nile na narị afọ abụọ gara aga.
Azu kachasị mma nke ewu ara ehi: ụzọ e si echekwa na mmezi
Taa, ịzụ ụmụ ewu na mkpocha ụlọ abụghị obere ewu karịa oge gara aga. Na ntuputa nke umu uzo ndi ozo nke oge a bu ihe ndi ozo, inweta mmiri ara ehi, anu, aji, na iburu obere umu anumanu ahu, obuna ndi na - eto eto, ndi na - agbaso iwu di mfe, ka ha ga - enweta oganihu nke mmiri ara ehi, hypoallergenic.
Ihe kacha mkpa banyere mgbe ị ga-akụ mkpụrụ. Oge maka mpaghara dị iche iche, kalenda nke ụbọchị dị mma
Ihe omimi di omimi na windill windows gi: ihe nile banyere eto eto nwa geraniums
Emeputara aha gị n'onwe gị
Ehi na-aṅụ mmiri: ego ole na-enye, gịnị ma ịṅụ ma ọ bụ ṅụọ ntakịrị
Nke a dịgasị iche abụghị nsogbu ọbụla maka ndị na - amalite - Mkpụrụ vaịn
Otu esi akụ na-eto eto teasel
Azu maka ikpo oku nke ulo